Herinandro Masina – Semaine Sainte | FKMP
Herinandro Masina – Semaine Sainte
Fotoana faratampony indrindra amin'ny fankalazana kristianina.
Manomboka ny Alahady Sampankazo ary mifarana ny Sabotsy Masina
Toy ny Kristianina eran-tany dia miditra amin'ny fotoana fankalazana ny Herinandro Masina ny Kristianina teto amin'ny FKMP. Ny fankalazana ny Alahady ny Sampankazo no nanombohana izany. Fotoana fahatsiarovana ny nidiran'ny Tompo tao Jerosalema, fotoana ihany koa hanombohana ny fandinihana ny Fijalian'ny Tompo. Ny Kristianina isam-boamiera, isaky ny Kartie ny Mpiservy no niara-mientana sy miara-mientana hankalaza izany.
Ny « Herinandro Masina », ho an’ny Kristianina dia ilay herinandro mialohan’ny Paka. Izany hoe ilay herinandro farany nahaveloman’ny Tompo teto an-tany. Ny Alahadin’ny Sampankazo (Rameaux) no toy ny varavarana mamoha na mitondra ny Kristianina ho amin’ny Herinandro Masina. Izany hoe: manomboka ny harivan’ny Alahadin’ny Sampankazo dia mivavaka isaky ny hariva ny ankamaroan’ny fiangonana mba hisaintsaina sy handray ho an’ny tenany ny fijaliana nentin’i Jesoa Tompo hamonjena ny olombelona.
Mandritra ny Herinandro Masina no mankalaza ny Triduum Pascal isika :
Ny Alakamisy Masina : fankalazana ny namoronan'i Jesoa ny Sakramentan'ny EOKARISTIA taorian'ny Sakafo farany niarahany tamin'ny mpianany. Tamin'io fotoana io ihany koa no nanehoan'ny Tompo ny fanetran-tenany tamin'ny nanasany ny tongotry ny mpianany.
Ny Zoma Masina : fankalazana ny Fijalian'i Tompo. Fanatrehana sy fibanjinana an'i Kristy nijaly sy maty ary fihobiana ny Hazofijaliana namonjen'i Kristy antsika.
Ny Sabotsy Masina : Alina Masina, fieretan-tory ankalazana amin'ny fomba manetriketrika ny Fitsanganan'ny Tompo ho velona!
Ndeha àry isika hoy ny Pretra Aomonie-ntsika Mopera Edmond Andriambololona hiaina tanteraka izany Herinandro Masina izany, handini-tena, hanolotra ny fiainantsika, ny fijaliana sy ny fisedrana atrehintsika, ny fanantenana mamelona antsika amin'ni Jesoa Kristy; koa na eo aza ny fitsapana sy ny karazam-pahoriana dia handresy miaraka amin'ny Tompo nitsangan-ko velona isika!
Ny fiarahantsika mandritra ity Herinandro Masina ity
Alakamisy 18 aprily amin'ny 7 ora sy sasany hariva (19h30)
Zoma Masina 19 aprily amin'ny 7 ora sy sasany hariva (19h30)
Sabotsy Masina 20 aprily amin'ny 9 ora alina (21h) miandry ny masoandro mody
Tsarovy mandrakariva ary aza hadinoina ny fahoriana nentin’ny Tompo mba hamonjena antsika mandritra izao Herinandro Masina izao, fa tena tiany isika ka ny ainy no nafoiny hamonjena antsika.
Samia ary manovo hery sy fihavaozam-panahy amin’ny fankalazana ny “Herinandro Masina” (Asa 1:8).
Kristianina eto amin'ny FKMP
Sary Alahady Sampankazo 2019
Previous Post: Teny soa sakafo Alatsinainy Masina (Jn 12,1-11) 15/04/2019
Next Post: Pèlerinage des jeunes d’Ile-de-France à Chartres